Ny valin'ny OnePlus 6 amin'ny benchmark dia mihoatra ny mpifaninana aminy | Androidsis
Ny OnePlus 6 dia mandresy ny mpifanandrina aminy amin'ny benchmarks
OnePlus dia nametraka ny tenany ho iray amin'ireo marika sinoa manana ny tanjaka iraisam-pirenena indrindra. Ary koa, ny paikadin'ny marika fandefasana telefaona 1-2 isan-taona dia miasa ho azy ireo. Amin'ity taona ity ny OnePlus 6 dia antenaina hihatra amin'ny tsena. Fantatra tsikelikely ny antsipirihany farany momba ny haavo farany ambony amin'ny marika. Izao dia efa nanivana fitsapana fari-pahaizana amin'ny telefaona mampanantena zavatra betsaka.
Hatramin'ny nivoahan'ny sary sasantsasany izay mampiseho ny valiny mety ho azon'ny telefaona tamin'ny fitsapana tany Antutu. Vokatra izay mampanantena be ary ny OnePlus 6 dia toa mihoatra lavitra an'ireo mpifanandrina aminy eny an-tsena
Hita amin'ireo sary ny anaran'i OnePlus A6000, izay anarana kaody an'ny finday avo lenta vaovao avy amin'ny marika sinoa. Fa resaka finday io, mbola tsy tonga amin'ny tena anarany akory. Ny isa azon'ny fitaovana amin'ity fitsapana ity dia isa 276510. Ka io no laharana ambony indrindra raha oharina amin'ny daty.
Raha ny marina, mifototra amin'ny isa, ity OnePlus 6 dia nihoatra ny Xiaomi Mi MIX 2S, avo lenta iray hafa izay tsy ho ela dia hamely ny tsena. Ka hitantsika ny fomba ahatongavan'ireo marika sinoa miaraka amin'ireo finday matanjaka indrindra eny an-tsena. Farafaharatsiny izany no hitantsika ireo fitsapana ireo.
Ary koa, ny zava-misy fa manana isa ambony toy izany ny OnePlus 6 toa manampy amin'ny fanamafisana fa ny fitaovana dia hanana Snapdragon 845 ho toy ny processeur. Ity dia zavatra saika noraisina ho azy. Saingy manome valiny bebe kokoa ireo valiny ireo.
Ary koa, toa izany ny telefaona dia hanampy amin'ny lamaody ny efijery miaraka amin'ny notch na ny notch eo ambony. Andrasana ihany koa izany OnePlus 6 dia manana tahan'ny 19: 9. Ka ny marika dia mikasa ny hamela ny tahan'ny 18: 9 ary handeha lavitra kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny OnePlus 6 dia mandresy ny mpifanandrina aminy amin'ny benchmarks
Izao dia ny fahatezerana rehetra, esorin'i Apple ny taona manaraka
Huawei dia hampiasa faharanitan-tsaina artifisialy ao amin'ny faritra afovoany ambany